Daadinta: Xirfad dukaameysi abuurka dukaanka
Ku soo dhawow koorsadan on "Daadinta: Xirfad dukaameysi abuurka dukaanka".
Dhamaadka tababarkan, waxaad yeelan doontaa amar kaamil ah deegaanka Shopify waxaadna awood u yeelan doontaa inaad dhisto dukaan xirfad leh A ilaa Z kaasoo kuu oggolaanaya inaad sameyso iibkaagii ugu horreeyay. Intaa waxaa sii dheer, mawduuc lacag bixin ah ($ 200) ayaa laguu soo bandhigi doonaa inta lagu jiro tababbarkan si aad u hesho tarjummo xirfad leh.
Laga soo bilaabo abuurista dukaanka, illaa qaabeynta, iyada oo loo marayo ku darista badeecooyinka iyo naqshadeynta dukaankaaga, wax walba waxaa lagu sharaxay si faahfaahsan.
Daadinta: Xirfad dukaameysi abuurka dukaanka Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Dib-u-tababarid ama dallacsiin iyada oo loo marayo barnaamijyo daraasad shaqo ayaa lagu daadiyaa laamaha
horeHorudhac Tallaabada Tallaabo Talaabo Af Ingiriisi ah
socdaAbuur goob oo ku iibso tababarkaaga khadka tooska ah 'Podia'
Covid-19: dib u qiimaynta wakhtiga dheeraadka ah ee cusbitaalka
Tilmaamaha iyo tabaha muhiimka ah ee 'Excel'
Mashruucayga Bilaabashadu miyuu taagnaadaa?
Fasax mushahar leh: Caawinaad aan caadi aheyn oo laga helo taageerada gobolka ee la kordhiyay